Global Voices teny Malagasy » Ho Fiarovana Ny Zoko eto Makedonia Hanala Zaza · Global Voices teny Malagasy » Print
Ho Fiarovana Ny Zoko eto Makedonia Hanala Zaza
Voadika ny 01 Oktobra 2016 19:56 GMT 1	 · Mpanoratra Ana Miškovska Kajevska Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Makedonia, Fahasalamàna, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona, Ny Tetezana - The Bridge
Fitaovana fijerena ny maha-bevohoka na tsia. SARY: Johannes Jander (CC BY-ND 2.0)
Talohan'ny volana Jiona 2013, nanana lalàna somary liberaly momba ny fanalan-jaza ny tao Makedonia. Afaka manao fandidiana (fanalan-jaza) tsy mila fotoam-piandrasana sy torohevitra tsy maintsy arahina ny vehivavy.
Hatramin'ny nametrahana ny lalànan'ny fanalan-jaza somary lasa voafetra kokoa  tamin'ny Jiona 2013, nanjary tsy vitany hoe mila antonta-taratasy ny fanalan-jaza fa lasa sarotra sy miandry ela ny dingana tsy maintsy arahina, miampy ny olana efa misy amin'ny fanatsaharana ny vohoka.
Na dia voalazan'ny lalàmpanorenana amin'ny fomba ofisialy ao amin'ny firenena aza ny maha laika sy ny fahafahana misafidy mikasika ny fiterahana, feno andinin-tsoratra masina manohitra ny safidy ny resaka ara-politika sy ny media mahazatra ao Makedonia, anisan'izany ny hetsika vatsian'ny fanjakana ara-bola izay manentana ny vahoaka mba hanohitra ny fanalan-jaza .
Tsy misy ankehitriny ny fanabeazana feno momba ny fananahana ary tsy ampy mihitsy ny fitaovana fisorohana vohoka (vonjimaika), tahaka izany ihany koa ny fanafody fanalan-jaza izay maha-voasazy amin'ny fomba ofisialy. Fanampin'izany, tsy ampy ny isan'ny mpiasa, tsy maharaka andro ary matetika sarotra idirana – indrindra ho an'ireo monina any ambanivohitra sy ny tanàna kely andrenivohitra ny rafi-pitsaboana efa miharatsy.
Izany no zava-misy mahatonga ahy hiloa-bava ho fiarovana ny zoko, sy ny zon'ny vehivavy rehetra hahazo manala zaza amin'ny fomba azo antoka, ara-dalàna, mora atao haingana sy takatry ny fahefa-mividy.
Ao anatin'ny fiarahamonina anjakazakan'ny lehilahy tahaka an'i Makedonia, efa sarotra be ho an'ny vehivavy ny mahazo fahombiazana arak'asa. Tsy maintsy miasa mafy kokoa noho ny lehilahy mpiara-miasa aminy ny vehivavy mba ho hita hoe mitovy amin'izy ireo eo amin'ny fahaizana, ary mety hiharan'ny sakantsakana koa izy. Ankoatra izany, ho voatsaratsara hatrany amin'ny toe-batana ny hasiny amin'ny maha-olombelona, ary ny fiarahamonina dia manantena azy – fa tsy ny vadiny- handray andraikitra amin'ny fikarakarana tokantrano, fikarakarana ny ankizy sy ny ray aman-dreny efa antitra.
Ravehivavy no tsy maintsy mijoro mandritra ny 24/7 mba hanampy amin'ny fianaran'ny ankizy, manaraka azy ireo amin'ny zavatra hafa ankoatra ny fianarana, ny fandehanana any amin'ny dokotera, tsy lazaina intsony ny andraikitra amin'ny fikarakarana ny ao an-trano rehefa misy marary. Raha toa izany, tsara vintana kokoa izy raha tsy voaroaka, na tsy mahazo fanohizana ny fifanarahana arak'asa rehefa avy manambara fa bevohoka.
Ny reny tsy manam-bady sy ny vehivavy tsy afaka mahazo andro tsy fiasana no tena sahirana kokoa. Tsy lazaina intsony ny vehivavy mitaiza ankizy mila fikarakarana manokana.
Miteraka enta-mavesatra ho an'ny ny vehivavy ireo fepetra ireo na dia efa nomanina sy natao mialoha tamin-kafaliana aza ny vohoka entiny. Lasa enta-mavesatra izy ireo rehefa misy ny tranga vohoka tsy niriana, indrindra raha notorontoronina ivelan'ny fanambadiana ny zaza – toe-javatra tsy eken'ny fiarahamonina mpandala ny nentim-paharazana ho ara-dalàna na dia mateti-pitranga aza izany.
Manova ny fiainan'ny vehivavy bebe kokoa noho ny an'ny lehilahy ny fitondrana vohoka sy ny fikarakarana zaza, na eo amin'ny fiovana ara-biolojika na ny fiovan'ny fahazarana isan'andro ary ny lalan'asa maharitra ary ny fampivelarana ny tena manokana. Kanefa ny fanjakana Makedoniana dia mbola tsy manome rafitra ara-dalàna sy ara-panjakana ampy—tahaka ny lalàna ahafahana mandao vetivety ny asa hikarakarana ny zaza na fahafahana tsy miasa raha sendra misy hamehana—izay manamora ny fitovian-danjan'ny andraikitra maha-ray aman-dreny, amin'ny raharaha ao an-tokantrano sy ny fikarakaran'ny lehilahy ireo beantitra.
Noho izany, raha tsy vonona handray andraikitra ny fanjakana sy ny lehilahy, dia farafaharatsiny tokony tsy hanakana ny safidin'ny vehivavy eo amin'ny lafiny fiterahana. Amin'ny teny hafa, ireo izay heverina hanatontosa ny adidy napetraka aminy amin'ny zavatra iray dia tokony omena zo hanapa-kevitra feno amin'ny fanatontosana izany adidy izany na tsia, tsy misy sakantsakana ataon'ny fanjakana noho ny fivavahana, kolontsaina na foto-kevitra hafa efa nampanjakaina ho rafitra ara-dalàna.
Amin'ny toe-javatra voalaza eo ambony, dia tsy fandavana hanao adidy mbola tsy masaka ny fanapahan-kevitra hanaovana tsindrona risikaina (hôrmôna) sy/na fandidiana fa tsy mirona any amin'ny fiterahana izay tsy mbola azo antoka ho an'ny zaza ao an-kibo ny tontolo fikolokoloana sy fitiavana azy. Mifanohitra amin'izany kosa; fandraisana adidy faratampony ho an'ny tsirairay sy ny tontolo iveloman'ny tsirairay sy avelany avy eo izany.
Mivelatra mihoatra ny safidy hiteraka na tsia , anefa, ny zo fanalan-jaza. Ahafahan'ny vehivavy ho sefon'ny vatany fa tsy hamela ny manampahefana ara-politika, ara-pivavahana sy / na ny fianakaviana hanao takalon'aina azy. Ny fahalalahan'ny vehivavy hampihatra ny zo ara-nofo sy ara-pananahana dia fahalalahana mila isitrahana amin'ny endrika fenon'ny fiainana ara-nofon'ny olona iray, ary miditra amin'ny firaisana ara-nofo ho amin'ny fahafinaretana ara-nofo fotsiny.
Ny fidirana amin'ny fisorohana vohoka sy ny fanalan-jaza dia midika fidirana malalaka mankany amin'ny fahafinaretana, fahaiza-mamorona sy fifandraisana lalina eo amin'ny olona roa ivelan'ny fameran'ny fampianarana nentin-drazana.
Ny fanandrata-teny ho amin'izany fidirana malalaka izany dia fiadiana ho amin'ny zon'ny vehivavy sy ny lehilahy ho amin'ny fisiana amin'ny fiahiana, zo ho tompon'andraikitra sy hanana fiainana ara-pananahana, saingy ambonin'izany zavatra rehetra izany, ny zo ho sambatra sambatra sy ho olombelona feno.
Ana Miškovska Kajevska, PhD  dia mpikatroka sy manam-pahaizana momba ny fitovian-jòn'ny lahy sy ny vavy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/10/01/89469/
 nametrahana ny lalànan'ny fanalan-jaza somary lasa voafetra kokoa: http://hera.org.mk/wp-content/uploads/2016/09/Ana-M-Kajevska-Abortus-Ukinuvanje-na-demokratijata_ENG.pdf
 hetsika vatsian'ny fanjakana ara-bola izay manentana ny vahoaka mba hanohitra ny fanalan-jaza: https://globalvoices.org/2011/02/25/macedonia-reactions-to-government%E2%80%99s-anti-abortion-campaign/
 Ana Miškovska Kajevska, PhD: http://amkphd.blogspot.mk/